Xukuumadda Denemark oo marti galinaysa shir looga hadlayo arrimaha Soomaliya. – Radio Daljir
Xukuumadda Denemark oo marti galinaysa shir looga hadlayo arrimaha Soomaliya.
Copenhagen, Sept 27 – Kooxda xiriirka Caalamiga ah ee Somaliya ee loo yaqaano ICG ayaa lagu wadaa todobaadkan shir kusaabsan abaaraha iyo horumarinta ammaanka Soomaaliya in ay ku yeeshaan magaalada Copenhagen ee caasimada Denemark.
War qoraal ah oo kasoo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Denemark ayaa lagu sheegay kulanka in diiradda lagu saarayo waxka qabashada ammaanka, siyaasadda iyo xaaladda banii’aadan ee ka jirta xilligan dalka Somalia.
Wasaaradda arrimaha dibadda Denemarka ayaa intaasi ku dartay in kulanka uu furmi doono maalinta Khamiista ee soo socota iyadoona uu qaadan doono laba maalmood, waxaana arrimaha sida gaarka ah loo darsi doono ka mid ah dhitooyinka bani’danimo ee ka jirta xilligan Soomaaliya, ka bixitaanka Al-Shabaab ee Muqdisho iyo xaaladda burcad-badeeda Soomaaliya.
Shirka lagu qabanayo caasimadda Denemark ee Copenhagen ayaa waxaa la filayaa inay ka qayb galaan masuuliyiin ay ka mid yihiin R/wasaaraha Soomaaliya Prof. Cabdiwali Maxamed Cali, wakiilka xoghayaha guud QM ee Soomaaliya Augustine Mahiga iyo xiriiriyaha arrimaha bani’aadanima QM
ee Soomaaliya Mark Bowden.
Kooxda Xiriirka Caalamiga ee Somaliya ee ICG ayaa ka kooban dalalka daneeya arrimaha Soomaliya oo ay ka mid yihiin Mareaykanka, Midowga Yurub, Norwey, Tanzania iyo Sweden.
Maxamud Cabdi Ibraahim